January 6, 2022 - Online Hartha
မိုးရှာပွီးတဲ့အခြိနျ ဗှကျအိုငျထဲမှာ ဆော့ကစားနတေဲ့ကလေးငယျကို မိခငျဖွဈသူက ရိုကျဖို့ တုတျကိုငျပွီးသှားလိုကျသောအခါ
January 6, 2022 by Online Hartha
မိမိသားသမီးမြား ငှကေို ငယျစဉျကတညျးက စနဈတကြ သုံးစှဲတတျအောငျ သငျပေးနိုငျမညျ့ နညျးလမျးမြား
January 6, 2022 January 6, 2022 by Online Hartha
ကလေးတွေကို စနစ်တကျ ငွေစုတတ်အောင် သင်ကြားပေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ငွေကို စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်က အသက်ကြီးတဲ့အထိ စွဲသွားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်း ရှိတာက ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ အဓိကအချက်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ “လူဆိုတာ ငွေနဲ့နေ့စဉ် ဆက်ဆံရတယ်။ တစ်သက်လုံးလည်း ဆက်ဆံသွားရမယ်။ အဲဒါကြောင့် ငွေကို စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်ဖို့က ဘဝမှာ အရေးကြီးပါတယ်”လို့ Sammy Rabbit စာအုပ်တွေကို ရေးခဲ့သူ Sam X Renick က ပြောပါတယ်။ ကလေးတွေကို ငွေအကြောင်းအသက် ၃ နှစ်၊ ၄ နှစ်ကနေ စသင်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ကလေးကို စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင် ခေါ်သွားပြီး ငွေကို တစ်ခုခုဝယ်ရန် သုံးကြောင်း၊ ငွေရဖို့ ဘယ်လို ရှာဖွေရကြောင်း ပြောပြပါ။ … Read more
အိမျဆောကျတဲ့အခါ အုတျကို ရစေိမျသငျ့လား?ဗဟုသုတအနနေဲ့ သိထားသငျ့ပါတယျ…
အုတ်ကိုရေစိမ်ခြင်း အုတ်ကိုရေစိမ်ရတာက ပန်းရံလုပ်ငန်းမှာ အဓိကအကြောင်းရင်းကြီး နှစ်ချက်ရှိတယ်။ ပထမတစ်ချက်တော့ အုတ်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာ မြောက် များစွာ‌ သော ဖုန်တွေဟာ လုံးထွေးနေတတ်တယ် ။တစ်ခါတစ်ရံမှာ ညစ်ပတ်ပေကျံတာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ တကယ်လို့များ အဲ့ဒီဖုန်တွေ ညစ်ပတ်ပေကျံတာတွေကို တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖယ်ရှားခြင်းမပြုဘူးဆိုရင် အုတ်နဲ့ မဆလာကြားမှာ စေးကပ်ခိုင်မြဲမှု တွဲကပ်မှုမရှိဘူး။ အကျိုးသက်ရောက် မှုကလည်း အားနည်းတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ညစ်ပတ်ပေကျံနေတဲ့ အုတ်များကို အသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ နံရံတွေဟာ တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်မာမှုမရှိဘူး။ မလိုအပ်ဘဲနဲ့သူ့မှာ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ ပစ္စည်းကုန်ပြီးတော့ အက်ရာတွေလဲပေါ်လာတတ်တယ်။ နောက်ထပ်တစ်ချက်က အုတ်က မြေကြီးကိုဖုတ်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ သူက ရေစုပ်ယူမှုအားကောင်းတယ်။ ခြောက်သွေ့ပြီးတော့ ပွတဲ့အပေါက်ငယ်လေးတွေပါရှိတဲ့ အုတ်ချပ်တွေက မဆလာထဲမှာပါတဲ့ရေကို အလျှင်အမြန် စုပ်ယူသွားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘိလပ်မြေအိပ်စက်ဖို့အတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ (water … Read more
အသကျ (၅၀)အတှကျ အသကျ(၃၀)မှာ ဒါတှကေို မဖွဈမနေ ပွငျဆငျထားပါ
အသက် ( ၅၀ ) မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ချင်ရင် အသက် ( ၃၀ ) မှာဒါတွေစပြီး လုပ်ထားသင့်ပါပြီ အသက် ၃၀ တန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်တွေကို တကယ်စလုပ်သင့်ပါပြီ။ အသက် ၅၀ မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ချင်ရင်အသက်၃၀ မှာဒါတွေစပြီး လုပ်ထားပါ…။ အသက် ၅၀ အရွယ်တွေကို ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိသလဲမေးခဲ့ပါတယ်…။ အဖြေတွေက သိပ်ကို ကောင်းမွန်ပြီးရိုးရှင်းလှပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်၃၀တန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင် ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်သင့်ပါပြီ..! ၁. ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့။ သောက်မိပြီဆိုရင် ဖြတ်ပစ်ပါ။ ၂. အမြန်စာတွေကို မစားပါနဲ့တော့။ ၃. မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ ..ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပါစေ။ ၄. နေရောင်ကာဆေးမပါဘဲ နေပူထဲမထွက်ပါနဲ့တော့။ ၅. ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ ၆. ပိုက်ဆံ စစုပါ။ ဘယ်လောက်နည်းနည်း စုဖြစ်အောင်စုပါ။ ၇. … Read more
သတိထားသင့်တဲ့ အိမ်ဆောက်ရာမှာ သုံးသော သံချောင်း
မြန်မာ့စကားပုံမှာ အတုကတထောင် အစစ်ကတယောက်ဆိုတဲ့ စကားပုံရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အစစ်ဟာနာမည်ရလာပြီဆိုလျှင် အတုပေါင်းများစွာပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အတုနှင့်အစစ်မှာ ဘယ်အတုကမှ အစစ်ထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလောကဟာအပြိုင်အဆိုင်များလှတဲ့လောကတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ဆိုတာ Red Ocean နဲ့ Blue Ocean ဆိုပြီးရှိနေတာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလောကဟာဆိုရင် Red Ocean ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမယ် Red Ocean ကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် Red Ocean ဟာ ဈေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်များပြီး အတိုက်အခိုက်များတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းဟာလဲ ဈေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်၊ ဝန်ဆောင်မှုအပြိုင်အဆိုင်ပြင်းထန်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သံချောင်းဈေးကွက်မှာ နိုင်ငံခြားကနေ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းရောင်းချတဲ့ Import သံချောင်းများရှိသလို၊ ဒီကစက်မှုဇုံမှာပဲ ထုတ်တဲ့ Local သံချောင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ သံချောင်းအတုအစစ်ကိစ္စကတော့ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ သံချောင်းတံဆိပ်များကို Local စက်ရုံမှာပဲ စက်မှုဇုံထုတ်သံချောင်းတွေမှာ အသားတံဆိပ်ပြန်ရိုက်ပြီး အော်သံချောင်း … Read more
မြန်မာ့ဆိုက်ကား ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းရဲ့ လေးနက်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
၁၃၀၀ပြည့် အရေးတော်ပုံလို့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မော်ကွန်း ထိုးခဲ့တဲ့ အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေး အုံကြွ လှုပ်ရှားမှုကြီး ကျွန်မတို့ မန္တလေးမှာလည်းဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေက အမျိုးသား လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆိုက်ကားယာဉ်ငယ်ကို ဝိုင်းပြီးအားပေးလိုက်ကြတော့ ဓါတ်ရထားလုပ်ငန်းဟာ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးလို့အလုပ်ရပ်နားသွားရတာပေါ့။ မန္တလေးမြို့မှာ အဲဒီခေတ်က မြို့သူမြို့သားများစီးနင်း သွားလာဖို့ မြင်းရထားခေါ်တဲ့ မြင်းတပ်ရထားလုံး နဲ့ ဓါတ်ရထားပဲ ရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာလို လံခြား မရှိဘူး။၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံကာလကြီးကို ရောက်လာ တော့အမျိုးသားစီးပွားရေးဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ မူတစ်ခုပေါ်လာပြီး သွေးစုပ် ချယ်လှယ်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသားပိုင် လုပ်ငန်းတွေအပေါ် စီးပွားရေး စစ်မျက်နှာတစ်ခုလည်း အမျိုးသားတွေက ဖွင့်လာ ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စက်အား မပါ ၊လောင်စာဆီ မလို ၊လူအား နဲ့ လှုပ်ရှားတဲ့ … Read more
နေပြည်တော်လမ်း နေပူထဲ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးလျှာက်ကြည့်လိုက်သောအခါ နေပြည်တော် ခရီးသို့အသွား လမ်းခုလတ် တွင် နေပူပူ ထဲမှာ ကိုရင် ငယ်လေးတစ်ပါး လမ်းကြုံလိုက်ဖို့ ကားတားနေတာ မြင်နေတာ နဲ့ ကားရပ်ခိုင်းပြီးကားပေါ်သို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ တခြားကားတွေကလည်း လူအပြည့် ဆိုပြီး မရပ်ဘူး ဒကာကြီးရယ်တဲ့ ကိုရင်လေး ကားတားနေတာ၂နာရီကျော်ကြာပြီတဲ့ ဒါနဲ့ ကိုရင်လေးကို ဘယ်ကျောင်းကလဲ ဘွဲ့နာမည် ဘယ်လိုမှည့်ခေါ်ပါသလဲ ဆိုပြီး စတင်မိတ်ဆက်ကာ သွားလိုတဲ့ ခရီး စဉ်မေးကြည့်တာ့ သံဃာ ၄၅ ပါးရှိတဲ့ တောရကျောင်းက ပါတဲ့စာဝါ လိုက်ဖို့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် က စာအုပ် ခဲတံ များအတွက် မယ်တော်ကြီး ဆီ ပြန်အလှူ ခိုင်းလို့ ရွာ ပြန်အလာ ရွာရောက်တော့ မယ်တော်က … Read more